Kora Finfinnee bara 1976 booda korri ABO guddichi taa'ame - BBC News Afaan Oromoo
Kora Finfinnee bara 1976 booda korri ABO guddichi taa'ame
13 Adooleessa 2019
Paartileen Oromoo ABO Qaama Ce'umsaa fi ABOTokkoomee walitti makamuun kora jalqabaa Soodareetti gaggeessan.
Gaaffii uummanni bal'aan Oromoo nugaafachaa ture bu'uura godhachuun paartileen Oromoo lama ABO Tokkoomee fi ABO Qaama Ce'umsaa walitti makamuuf murteesine jedhan Dura taa'aan ABO Qaama Ce'umsaa Obbo Galaasaa Dilboo.
Paartileen lamaan erga tokkoomanii booda , dhimmoota hiree ofii ofiin murteefachuu Oromoo, ilaalchota farra tokkummaa fi finxaalessummaa Oromoorratti aggaamamu irratti qabsaa'uu fi jijjiirama eegalame itti fufsiisuuf ni hojjenna jedhan
Tokkummaa amma uumne kanaan boodas paartilee Oromoo biroo waliin tokkummaa fi walgargaaruun hojjennas jedhan.
" Tokkummaan ABO ni jalqabame malee hin xumuramne. Adeemsi qabsoo ABO kan booda faca'iinsarraa gara tokkummaatti kan cehu ta'aa deema" jedhan.
Tokkummaan paartilee ABO gidduutti eegalame kun dhaabichaaf tarkaanfii haaraa, paartilee Oromoo birootiifis fakkeenya ta'a jedhan.
Qabsoon kana booda taasifamu aarsaa fi qabsoo ABO'n kana dura kanfalaa ture kan caalu miti jedhan.
Dura taa'aan ABO Tokkoomee Obbo Abbaa Nagaa Jaarraa gamasaaniin, tokkummaan paartilee lamaanii akeeka afur qaba jedhan.
"Abbaan qabsoo, uummata Oromoo, sababa maqaa ABOtiin rakkoof saaxilamaa tureef kabaja kennuu, sagantaa haaraan sochii jalqabuu, qabsaa'ota walitti fidanii akka walquba qabaatan gochuu fi hoggana haaraan qabsoo nagaa itti fufuufi"
Kana booda qabsoon hidhannoo goolabameera kan jedhan Obbo Abbaa Nagaa Jaarraa paartileen lamaanis boordii filannootti galmaa'uun qabsoo karaa nagaa itti fufna jedhan.
Paartichi erga tokkoomeen booda dhimmoota ijoo oromoon gaafatu irratti fuulleffatee akka hojjetus himaniiru.
" Afaan Oromoo Afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'u, laftii fi daangaan Oromoo akka kabajamu, saboonni biroo oromiyaa keessa nagaan akka jiraatanii fi wal ajjeesuun Oromoo gidduu akka hin jiraannef niqabsoofna" jedhan.
Kora tokkummaa paartilee lamaanii kanarratti paartileen Oromoo fi paartiin Saba Sidaamaas argamuun gammachuu tokkummaa paartichaaf qaban ibsaniiru.
ODP irraa saganticharratti kan hirmaatan Obbo Mogos Ida'ee, paartileen Oromoo hundi adeemsa keessa walitti makamaa deemuu qabu, yoo humnaa olta'e ammoo walkabajuun waliin qabsoofna jedhan.
Kana boodas adeemsa walbalaaleffachuu fi walballeessuurraa gara tokkummaan injifannoo argame itti fufsiisutti akka cehamuufis dhaamaniiru.
Dura taa'aan paartii ADO Obbo Leencoo Lataa, ABO ammayyuu paartiikoo jedheen waama jedhan.
Paartileen Oromoo hojiin hojjetan yoo tole, dhaloota hedduuf tolla, yoo dogogorre garuu dhaloota hedduutu miidhama jedhan.
"ABOn wareegama barbaachisu kanfalee tokko ta'uu qaba. Kan gochuuf hogganni wareegama sana kanfalee waan kana dhugoomsuu danda'u ammoo obbo Galaasaa dilbooti." Jechuun kora kanarratti imaanaa kennaniif.
Haalli amma biyyi kunii fi Oromoon keessa jiru walloluufi miti waldorgomuufuu yeroo hin qabnu jechuun dhaaman.
ABO Obbo Daawud Ibsaan hogganamu irraa sagantaa kanarratti kan argaman Obbo Ibsaa Nagawoo ammoo akkaataa maqaan paartii isaanii ittiin waamamaa jirurratti komii qaban ibsan.
'Dogongora uumame tooftaa dogongoraan hiikuuf yaaluutu ABO adda facaase'
Qabsoo ABO'f aarsaa maatiin kaffale
"Maqaan paartii keenyaa ABO shanee osoo hin taane ABO dha. Kuni sirreeffamuu qaba" jedhan.
Paartileen lamaan tokkummaa uuman moggaasa ABO jedhuun akka itti fufan ta'uu yoo himan paartiin Obbo Daawudiin hogganamus moggaasa ABO jedhu qaba.
Paartileen lamaan tokkummaa uuman guyyaa Boruu hoggana haaraa akka filatanis himaniiru.
Erga bara 1976 kora Finfinneetti gaggeefamee asitti korri ABO miilanaa kuni kan ifatti biyya keessatti kabajame kan jalqabaa ta'uunis eerameera.
ABO'n dhimma waldhabdee mootummaa waliin qabu irratti hirmaannaa garee sadaffaa gaafate
Daawud Ibsaa: Gochi amma mootummaan itti jiru hojii ABO dadhabsiisuuti
Simannaa WBO: 'Ajaja hayyu duree ABO fi waamicha Abbootii Gadaa kabajnee galle'
Callisa mootummaafi miira gammachuu magaalaa Hawaasaa
Gaazexeessituu ajjeefamuunshee namoota hedduu 'garaa nyaate'
ABO dhaabota siyaasaa lama, maqaa tokko
Ajaa'iba! Nama ganna 27f kophaasaa bosona keessa jiraate
Dhukaasa Magaalaa Baahirdaariin namoonni sadi ajjeefaman
Tiraamp dubartoota miseeensa Kongireesiin 'Ameerikaa gadhisaa' jedhan
ONLF waajjirasaa Finfinneetti bane